Zayed University - Higher Education any ivelany ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra
Créé : 1998
mpianatra (eo ho eo.) : 5000
Aza adino ny miresaka momba Zayed University
Misoratra anarana ao amin'ny Zayed University
Zayed University dia pirenena sy isam-paritra mpitarika ao amin'ny fanabeazana zava-baovao. naorina in 1998 ary tamim-pireharehana mitondra ny anaran 'ny nanorina ny Nation - ny faramparan'ny Sheikh Zayed Sultan Bin Al Nahyan, flagship ity andrim-panjakana efa nihaona ny Filoha ambony fanantenana. ankehitriny, Zayed University roa campus any Dubai ankehitriny sy Abu Dhabi izay mandray roa-pirenena sy iraisam-pirenena ireo mpianatra.
Zayed University no ho nitarika anjerimanontolo ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra sy fantatra eran noho ny fandraisana anjara eo amin'ny fanabeazana sy ny zava-bita ara-kolotsaina sy ara-toekarena karena sy ara-tsosialy.
Zayed University dia hanomana mahafeno fepetra nahazo diplaoma izay afaka mandray anjara amin'ny fanorenana ny firenena amin'ny alalan'ny fanatitra specializations sy ny fandaharan'asa ny fianarana izay mitovy fenitra iraisam-pirenena sy ny fanomezana ny tsara fianarana tontolo mba hanamafisana ny andraikitry ny anjerimanontolo maha-mpitarika ao amin'ny fivoaran'ny fikarohana siantifika sy ny fiaraha-monina.
Ny fiaraha-miasa fiaraha-monina izay mpianatra Fanabeazana, sampam-pianarana sy ny mpiasa dia miara-miasa amin'ny fikatsahana ny fikarohana sy ny fahalalana.
Ny saina ho matihanina ny etika amin'ny fanajàna ny fenitra ambony indrindra ny tena manokana ny fitondran-tena, mifototra amin'ny fanajana, manao ny marina, mitanila, fandraisana andraikitra sy ny mangarahara eo amin'ny fomba fanao sy ny fitsipi-pifehezana.
Zava-baovao amin'ny alalan'ny fananganana sy ny fampandrosoana ny avo indrindra amin'ny fampianarana fanao maneran-, fianarana sy ny fikarohana.
Aza Tia Tena sy ny fiaraha-miasa mba hahazoana antoka ny zava-bita ny Zayed University ny asa nanirahana sy ny stratejika tanjona amin'ny faratampony fahombiazany sy ny vokatra.
Leadership miorina amin'ny fitantanana tsara sy mitohy serasera eo amin'ny mpandray anjara rehetra University sy ny fisokafana amin'ny hafa kolontsaina, fahatsiarovan-tena sy rehefa mifandray tsara aminy, na tao anatiny sy ivelany ny oniversite fiaraha-monina
Ampio ny fanapahana-lelan fanabeazana tontolo iainana izay mampiroborobo ny famoronana sy ny zava-baovao.
Manomàna mahafeno fepetra nahazo diplaoma izay afaka handray anjara amin'ny fampandrosoana dingana, ary izay vokatra eo amin'ny firenena, hery amin'ny fahaiza-misaina fanakianana, ary misokatra ho amin'ny tontolo manodidina azy ireo.
Vonjeo high quality fanabeazana izay mifantoka amin'ny mampiroborobo ireo mpianatra’ fahalalana sy ny fahaiza-manao.
Hanatsarana ny fikarohana ny University haavon'ny.
Hiantoka fandaharana rehetra panjakana tolotra amin'ny fanarahana kalitao, fahombiazana sy ny mangarahara politika.
Hampielezana ny kolontsaina ny zava-baovao ao anatin'ny fikambanana
Fifandraisana sy ny Media Siansa
teknolojia & fanabeazana
Ny Tontolo Iainana Siansa sy maharitra
Fahasalamam-bahoaka sy ny Nutrition
Psikolojia sy ny Fanasoavam
Teknolojian'ny fampahalalana (Security & Network Tech)
Information Systems sy ny Teknolojia Management
Teknolojian'ny fampahalalana (Enterprise computing)
nanoro hevitra & akademika Dev't
Ianao ve mila miresaka momba Zayed University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Zayed University ao amin'ny Map
Zayed University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Zayed University.
Ras al-Khaimah Medical Siansa sy Fahasalamana University Ras al-Khaimah